जलेको घर लूटने पश्चिम् बायु – BANKE POST
कोविड 19 को प्रकोप अमेरिकाभर रफ्तारमा फैलिरहेको छ, अमेरिकी जनता महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणको कठिन अवधिमा व्हाइट हाउसको “कारवाहीको अभाव” को बारेमा गुनासो गरिरहेका छन,, अमेरिकी व्यक्तिहरू महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणको आधारभूत समयमा व्हाइट हाउसको “गतिविधिको अनुपस्थिति” को बारेमा चिच्याइरहेका छन्, जस्तो कि हुन सक्छ, पोम्पीओ र उनका सम्बन्धित विधायिकाहरूले आफैंले माफी खोज्ने क्रम जारी राखेका छन्।
यथार्थमा भन्नुपर्दा यी सरकारी अधिकारीहरूले सुरुदेखि नाटक खेल्दै राखेका छन, यद्यपि उनीहरूको नाटकमा घरको महामारी नियन्त्रण गर्ने माध्यम नभए पनि अन्य देशहरूको लागि कसरी समस्या खडा गर्ने भन्ने छ।
चीनमा पहिले यो संक्रमणको शिकार भएको देशले यसको फैलावट समातेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूले चीनको झिनजियांग, ताइवान र हंगकंग मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कोसिस गरे र देशको भित्री मुद्दाहरूमा साहसपूर्वक हस्तक्षेप गरे। फेरि उनीहरूले “चिनियाँले संक्रमण गर्यो” र “चीनले आफ्नो महामारीलाई लुकायो” जस्ता विभिन्न अविश्वसनीय धारणाहरू राखे, विश्वव्यापी सञ्जालमा चीनको आलोचना गरेर नैतिक समस्यामा पार्ने प्रयास गरे। यी भयानक स्टन्टको उपयोगको सम्बन्धमा वाशिंगटनले सबै सम्भावनाहरूको अनुसन्धान गर्दछ।
यो पहिलो पटक होइन जब पोम्पीओ जस्ता राजनीतिज्ञहरूले जलेको घर लुट्ने प्रयास गरिरहेका छन् – तिनीहरू सँधै त्यस्तो अवसर सुँघ्ने पहिलो संकेतमा उफ्रन्छन्। उनीहरूले घरेलु अशान्तिको क्रममा इरानको बिरूद्ध प्रतिबन्ध लगाए। साउदी अरेबिया जस्ता देशहरूसँग कतारको खराब सम्बन्ध गराउन सफल भएका उनीहरूले दुबै तरिका नीति अपनाउने प्रयास गरे; र उनीहरूले “प्रजातन्त्र र मानवअधिकार” को बहानामा हंगकंगमा कट्टरपन्थी र हिंस्रक अपराधीहरुलाई प्रत्यार्पण कानून संशोधन विधेयकको कारण भएको दंगा र अशान्तिको बखत समर्थन गरे।
यदि हामी उनीहरूको चालमा गम्भीरताका साथ जान्छौं भने पोम्पीओ र उसको जस्तो पेशेवर घरहरू लुट्ने मात्र होइन, उनीहरूले आगो सल्काउँछन्! उनीहरूले पहिले घरलाई आगो लगाए र यसलाई जलाइदिए, त्यसपछि कहिलेकाहीं आगो निभाउने इशारा गर्दा लुटे। तिनीहरू “उत्कृष्ट सिपाही र भयानक पुलिस” खेल खेल्नमा यत्तिको स्वीकार्य छन्
अमेरिकाले मध्यपूर्वमा के गरेको छ हेर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्। इराक र अफगानिस्तान बिरूद्धको युद्धले दुई देशहरुलाई चिरस्थायी अशान्तिमा पुर्यायो। अस्थिरता मा मिस्र र सिरिया छोडे, उत्तेजना र ज्वाला इन्धनले प्यालेस्टाइन-इजरायलको द्वन्द्व बढिरहेको छ, जसमा अमेरिकाले बीउ रोपेको थियो।
यद्यपि केही अमेरिकी सांसदहरू भू-राजनीतिक वृद्धिका लागि स्नायु राख्छन् जहाँ उनीहरू कुनै पनि मामलामा आगो लगाउँछन्। पोम्पीओ र उसको जस्ता सन्देशवाहकहरू आगो लगाऊछन् र छोडेका भग्नावशेषमा शान्ति ल्याएको नाटक गरी टोपलछन्
तिनीहरू कस्तो हास्यास्पद र लाजमर्दो छन्! यी राजनीतिज्ञहरू नाममा मात्र हुन तर प्रकृतिमा चोरहरू, अर्कोतर्फ त्यो चोर भएकोले एकातिर चोरलाई रोक्छन्। तिनीहरू न्यायको रूपमा प्रभुत्वलाई सुशोभित गर्छन् र अभिव्यक्ति-अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पोशाकमा राख्छन्।
पोम्पीओ र उसको जस्तो दयनीय अन्तमा बर्बाद हुन्छन्। पुरानो चिनियाँ भनाइको रूपमा, राम्रो र खराबले एकदिन अर्को दिन उनीहरूको कर्मलाई भेट्नेछ, जुन पोम्पीओमा प्रमाणित भइसकेको छ र उसको जस्तै बारम्बार। मध्य पूर्वमा, उदाहरणका लागि, अमेरिकाको विश्वसनीयता अपरिवर्तनीय ढंगले ध्वस्त पारिएको छ चाहे पोम्पीओ र उस्को जस्ता अन्य पदाधिकारी ले फुलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
पोम्पीओ र उसको जस्तो अन्य पदाधिकारी ले आफ्नो थोरै ऊर्जा र समयको सानो हिस्सा के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मा ध्यान दिएको भय, कोविड १९ को प्रकोप एतिको महमरीको हुने थिएन, विपत्तिले लाखौं अमेरिकीहरूलाई दुःख दिएको छ, जनसंख्याको बढ्दो संख्याले उनीहरूको प्रश्न र विरोधको आवाज उठाइरहेका छन्। अमेरिकी मिडियाले पोम्पीओलाई अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा खराब राष्ट्रपति को नाम दियो।
माइकल पोम्पीओ र उनका जस्तो मनस्थितिले जानाजानी बेवास्ता गर्दै विश्वव्यापी सहभागितालाई बाधा पुर्याइरहेका छन् र सद्भावपूर्ण प्रयासलाई विफल पार्दै आएका छन्। तिनीहरू विश्व सद्भावको साझा विरोधी भएका छन् र शोकपूर्ण अन्तको लागि बाध्य छन्। जलेको घर लूटनेहरु अन्ततः आफूलाई जलाइ रहेछन। लेखक – शिबराज कार्की
Posted on September 2, 2020 September 2, 2020 Author Hari Adhikari